I-china i-PES eshushu yokunyibilikisa ifilimu yabenzi beepaneli zealuminium kunye nabathengisi | I-H & H
Ifilimu eshukumayo eshushu
Impahla yethu yangaphandle
Impahla yangaphantsi engenamthungo
Ilebheli yokuDlulisa uBushushu
Ukuhombisa ngaphakathi ngaphakathi
Uluhlu lweLangatye eliLindayo
Ityala elikhuselayo ngombane
Itape yokuKhanya okuKhanyayo
I-PES eshushu inyibilika ifilimu yokuncamathela kwipaneli yealuminium
Ngaphandle okanye ngaphandle kwephepha nge
Ubukhulu / mm I-0.1 / 0.12 / 0.15
Ububanzi / m / 1m ngokwezifiso
Indawo yokunyibilika 70-112 ℃
Umsebenzi wobugcisa Umatshini wokucinezela ubushushu: 150 ℃ 8-12s 0.4Mpa
I-HD112 yinto eyenziwe nge-polyester. Le modeli inokwenziwa ngephepha okanye ngaphandle kwephepha. Ngokwesiqhelo ihlala isetyenziselwa ukutyabeka ityhubhu yealuminium okanye ipaneli. Senza ububanzi obuqhelekileyo be-1m, obunye ububanzi kufuneka bulungelelaniswe. Zininzi iintlobo zesicelo sokucaciswa. I-HD112 isetyenziselwa ukudibanisa amalaphu kunye namalaphu, i-PVC, i-ABS, i-PET kunye nezinye iiplastiki, isikhumba kunye nezikhumba ezahlukeneyo, imesh, i-aluminium foil kunye nealuminium ipleyiti, kunye ne-veneer. Sinako ukwenza ukuba ubukhulu 100micron, 120micron kunye micron 150.
1. Amandla amnandi okuncamathisela: Ukudityaniswa kwesinyithi, kuziphatha kakuhle kakhulu, kunamandla okuncamathela.
2. Ukungasebenzisi ityhefu kunye nokusingqongileyo: Ayizukukhupha ivumba elibi kwaye ayinakuba nefuthe elibi kwimpilo yabasebenzi.
3. Kulula ukuqhubekeka koomatshini nasekugcinweni kweendleko zabasebenzi: Ukulungiswa komatshini wokukhusela ngokuzenzekelayo, konga iindleko zabasebenzi.
4.Yenza umsebenzi omkhulu ngezinto zealuminium: le modeli ilungele ukusetyenziswa kwezinto ezidityanisiweyo zealuminium.
5. Ngephepha lokukhululwa: Ifilimu inephepha elisisiseko, elenza ukuba isicelo sibe lula ngakumbi ukufumana kunye nokusebenza.
I-HD112 ifilimu yokunyibilika eshushu isetyenziswa kakhulu kwifriji evaporator lamination. Ngokwesiqhelo izinto zokulaminetha yiphaneli yealuminiyam kunye netyhubhu yealuminium ingakumbi ezo zinealuminium enamatye ngaphezulu. Ngaphandle koko, Ukutshintsha ukunamathela kwendabuko kwityhubhu, ukunyibilika okushushu okunyibilikayo kwefilimu kuye kwaba yinto ephambili kubenzi be-elektroniki abamkelweyo iminyaka emininzi. Le modeli iyathengisa ngokuthengisa kumazantsi eAsia.
I-PES eshushu yokunyibilikisa ifilimu inokusetyenziswa nakwelinye ilaphu le-lamination kunye ne-bonding yesinyithi, umzekelo, ukubopha ubushushu kwezinye iihempe ezingenamthungo kunye neebhegi. Ukongeza, le mveliso inokusetyenziswa kwizicelo zangaphakathi zeemoto, ezinje ngokubopha ubushushu bemethi yemoto, iisilingi nezinye iimveliso. Ifilimu ye-PES inoluhlu olubanzi lwezicelo, nokuba ziingubo zelaphu okanye izinto zentsimbi, ukusebenza kwe-bonding kuhle kakhulu.
Egqithileyo I-PO eshushu inyibilika kwifilimu yokuncamathela yefriji evaporator
Okulandelayo: I-PES ishushu yanyibilika ifilimu yokuncamathela
Ifilimu yokuDibanisa emacaleni amabini
Uluhlu lwefilimu eshushu eshushu
Ifilimu yokuNamathela yePu
Ifilimu ye-Tpu yokuNamathela
Ifilimu ye-Tpu Elastic Adhesive
Ifilimu yokuncamathela eshushu ye-EAA yealuminium
Iteyiphu yokutywina ubungqina bento yamanzi
I-PEVA yokutywina iteyiphu yokukhusela inkunkuma ...
I-PO eshushu inyibilika kwifilimu yokuncamathela kwifriji eva ...
I-PES ishushu yokunyibilika kwesimbo sokubambelela kwifilimu
I-PES eshushu inyibilika kwifilimu yokuncamathela
Idilesi: 111, Ukwakha 5, No.1101, Huyi Road, Nanxiang, Jiading District, Shanghai, China
Idilesi yomzi-mveliso: Qidong isixeko, kwiPhondo Jiangsu
Inombolo yomnxeba: +86 021 59170529
Ihlokondiba: +86 18512142852 / + 86 13358078959